हिजो नेपाल आएका रेल भारत फर्किए, फेरि कहिले आउँछन् टुङ्गो छैन ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/हिजो नेपाल आएका रेल भारत फर्किए, फेरि कहिले आउँछन् टुङ्गो छैन !
काठमाडौं: शुक्रबार भारतबाट जनकपुर ल्याइएका नेपालका दुई वटा रेल शनिबार भारततिरै फर्किएका छन्। रेल ल्याएर आएका भारतको कंकोण रेलवे कर्पोरेसनका कर्मचारीहरूले शनिबार दुबै रेल भारत लिएर गएका हुन्। ‘उहाँहरू दिउँसो १२ बजेतिर रेल लिएर यहाँबाट जानुभएको हो,’ रेलवे तथा मेट्रो विकास कार्यालयका जनकपुरका इन्जिनियर विनोद ओझाले सेतोपाटीसँग भने,’अब ती रेल जयनगरको स्टेशनमा राखिनेछ।’ ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
रेल चलाउन अर्को समस्या कानुनको छ। रेलका सामान कसैले चोर्‍यो वा कुनै दुर्घटना भयो भने के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले कानुन बिना रेल चलाउन गाह्रो देखिएको छ । यस अघि जयनगर-जनकपुर रेल चलाउन २०१९ मा एउटा निकै छोटो कानुन थियो । उक्त कानुन अहिले सान्दर्भिक नभएकाले सरकारले रेल सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ। गत पुसमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल्वे सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पास नभएकाले रेल चलाउन समस्या देखिएको हो।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **